Masangano Ogadzirira Zuva reVashandi Pasina Kuwirirana
NCA yati vashandi vanofanirwa kuramba danho riri kuda kutorwa nehurumende yemubatanidzwa rekurambidza vana veZimbabwe kodzero dzavo dzekuisa zvido zvavo mubumbiro remitemo yenyika riri kunyorwa
Sangano rinorwira kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika rinobva muvanhu, reNational Constitutional Assembly, NCA, rinoti richatora mukana wemhemberero dzezuva revashandi, reMay Day, dziriko neChipiri, kuyeuchidza vashandi vose vemunyika kuti varambe vakangwarira pane zviri kuitwa nehurumende munyaya dzekodzero dzavo.
NCA inoti vashandi vanofanirwa kuramba danho riri kuda kutorwa nehurumende yemubatanidzwa rekurambidza vana veZimbabwe kodzero dzavo dzekuisa zvido zvavo mubumbiro remitemo yenyika riri kunyorwa pari zvino.
Sangano iri rinotiwo vashandi vemuZimbabwe vanofanirwa kutungamira mukuramba kutambira gwaro rebumbiro remitemo rarati riri kuumbwa kuburikidza nekutaurirana pakati pemapato maviri eMDC neZanu PF.
Sangano iri rakakurudzira veruzhinji kuti varambe kutambira bumbiro idzva muna Kurume 2000, uye rinoti riri kuita zvimwe chetezvo rwendo rwuno.
Mutauriri weNCA, VaMadock Chivasa, vanoti sangano ravo riri kuyeuchidzawo vashandi kurwisana nehuwori, uhwo sangano ravo rinoti hwadzika midzi muZimbabwe.
Mhemberero dzezuva revashandi dzichatungamirwa nezvikwata zviviri zveZCTU munyika yose, asi mabiko makuru achaitirwa muHarare.
Chikwata chinotungamirirwa naVaGeorge Nkiwane, chichaungana kunhandare yeGwanzura, ukuwo chinotungamirirwa naVaLovemore Matombo, chichiungana muHarare Gardens.
Mutungamiri wehurumende, uye vari mutungamiiri weMDC huru, VaMorgan Tsvangirai, vachange vari kuGwanzura, kusanganisirawo gurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu, Amai Paulina Mupariwa-Gwanyanya.
Zvichakadaro, munyori wezvekurongwa kwemisangano muMDC-T, VaNelson Chamisa, vanoti bato ravo richabatana nechikwata cheZCTU chichange chiri kuGwanzura mukucherechedza zuva revashandi iri.
Asi munyori mukuru wechikwata cheZCTU chinotungamirwa naVaMatombo, VaRaymond Majongwe, vanoti vakanga vakoka VaTsvangirai avo vavati vanzi vachange vari kuGwanzura.
VaMajongwe vanoti vachaenderera nehurongwa hwavo kunyange vamiriri vehurumende vanenge vasipo.